विशेष मानिन्छ साउने सोमबार::Hamro Koshi Awaj / awaz
विशेष मानिन्छ साउने सोमबार
किन बस्छन् महिला साउने सोमबारको ब्रत ?
देशभरीका विभिन्न शिवालयमा साउनको सोमबार हजारौँ हिन्दू भक्तजनको भीड लाग्ने गर्छ । बेलपत्र, धतुरोका दाना, मह, घिउ, दही आदिसमेत शिवालयमा चढाई भगवान शिवबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न भक्तजनको शिवालयमा भीड लागेको हुन्छ ।
साउन महिनाको सोमबार व्रत बसी महादेवको पूजा उपासना गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । साउन शिवजीसँग जोडिएको महिना हो । साउन महिनामा शिवपूजा गरे सबै देवताको पूजा गरेबराबर फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सनातन विश्वास छ । साउन महिना धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएकाले यो महिनालाई विशेष रूपमा लिइन्छ । विशेष गरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत एवं पूजा गर्ने चलन छ । पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहर रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको हुनाले महिलाहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिन्छन् ।
यो महिना व्रत बसी शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान्, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ । महिनाको अरू दिन नसके पनि सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । हिन्दू धर्ममा साउनलाई धर्मकर्मको महिना भनिन्छ । यो महिनामा व्रत, दान, पूजापाठ आदि गर्दा धेरै गुना बढी फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिछ । पुराणहरूमा मुख्य तीनथरि व्रतको चर्चा पाइन्छ । ती हुन्– साउने सोमबार, सोह्र सोमबार एवं सोम प्रदोष । सोमबारको व्रत विधि पनि अन्य व्रतजस्तै हुन्छ । यो व्रत सूर्योदयदेखि प्रारम्भ भएर तेस्रो प्रहरसम्म बसिन्छ ।
महिलाहरु मात्रै होइन महादेवलाई प्रिय गेरुवा रंगको वस्त्र लगाएर बोल वम भन्दै पुरुषहरु पनि साउनभरि नै विभिन्न शिवमन्दिरहरुमा पुग्ने गर्छन् । साउन महिनामा हरियाली छाउने र फल पहेंलो भएर पाक्ने हुनाले पनि यस महिनामा पहेंलो र हरियो रंगको महत्व बढेको हो ।
हिन्दू धर्म आफै पनि प्रकृतिप्रेमी धर्म र महादेव पनि प्रकृतिमै (कैलाश पर्वत) बस्ने भएकाले पनि साउने सोमबारमा हरिया–राता सौभाग्यका प्रसाधन लगाइन्छ । केही समययता साउनभरि हरियो, पहेंलो, रातो रंगका पहिरन, चुरा, पोते, नेलपोलिस, मेहन्दी आदि लगाई सो¥ह शृंगारमा सजिएर उपासना गर्ने चलन बढेको छ ।
यतिबेला महिलाहरू मठ–मन्दिर, बाटो, अफिस, घर सबैतिर हरियो रंगमा सजिएका देख्न सकिन्छ । साउनका लागि भनेर पहिरन किन्ने वा बनाउने तथा आफन्त एवं साथीभाइबीच सौभाग्यका सामग्रीहरू आदान–प्रदान गर्ने चलन पनि बढ्दै गएको छ । साउनमा शिव उपासना गर्दै बिवाहित महिलाहरुले पतिको दीर्घायू तथा अविवाहितहरुले योग्य पति पाउन पनि व्रत बस्ने गर्छन् ।
साउन महिनामा बढी वषर्षाका कारण किटाणुको संक्रमण हुने हुँदा लुतो फाल्ने चलन पनि छ । यो समयमा रोग लाग्ने सम्भावना बढी भएकाले मासु, लसुन तथा उत्तेजक परिकार खानुहुँदैन भनिन्छ ।
साउन शिवजीसँग जोडिएको महिना हो। साउन महिनामा पूजा गरे सवै देवताको पुजा गरेबराबर फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सनातन विश्वास छ । हिन्दु धर्ममा साउनलाई धर्मकर्मको महिना भनिन्छ। यो महिनामा व्रत, दान, पूजापाठ, आदि गर्दा धेरै गुना बढी फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । पुराणहरुमा मुख्य तीनथरी व्रतको चर्चा पाइन्छ ।
ती हुन्– साउने सोमबार, सोह्र सोमबार एवं सोह्र पद्रोस । सोमबारको व्रत विधि पनि अन्य व्रतजस्तै हुन्छ । यो व्रत विधि सूर्योदय देखि प्रारम्भ भएर तेस्रो प्रहरसम्म बसिन्छ । दिनको तेस्रो प्रहर अर्थात करिब तीन बजेतिर शिवजीको पूजा गरी कथा सुन्नुपर्छ । ब्रत गरेको दिन बेलुका एकपटक सात्विक भोजन गर्नुपर्छ । यसरी व्रत बस्दा सारा समस्या समाधान हुने विश्वास छ ।
साउन महिना नै शिवलाई बढी प्रिय लाग्नुको कारण के हो भने यो महिनामा अधिक वर्षा हुन्छ, जसले शिवको विषदग्ध तापयुक्त शरीरमा शीतलता प्रदान गर्दछ । शिव पुराण अनुसार शिव स्वंय जल हुन। भगवान शिवले सनतकुमाहरुलाई साउन महिनाको महिमा बताउने क्रममा भनेका छन् – मेरा तीन आँखामध्ये दाहिने आँखा सुर्य, बायाँ आँखामा चन्द्रमा तथा बीचको आँखा अग्नि हुन् ।
हिन्दू धर्मअनुसार सूर्य दक्षिणायन हुँदा देवताका रात र पितृको दिन हुने भएकाले हिन्दु धर्मावलम्बीले साउन महिनादेखि पितृकार्यको थालनी गर्ने चलन छ । साउने संक्रान्तिको दिन असारे वर्षा, हिलोबाट लाग्न सक्ने रोगबाट जोगिन लुतो फाल्ने चलन छ । फलफूल, नैवेद्य चढाएर कण्डारक नामक राक्षसको पूजा गर्नाले दाद, लुतो, खटिराजस्ता छालाजन्य रोगबाट बच्न सकिने विश्वासका रहीआएको छ । विवाहित महिलाहरू साउने संक्रान्तिदेखि साउन महिनाभर सौभाग्यको प्रतीक र वस्त्र पहिरिने र साउन महिनाभर प्रत्येक सोमबार व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गर्दछन् ।
किन विशेष छ साउने सोमबार ?
साउन शिवजीसँग जोडिएको महिना हो । साउन महिनामा शिवको पूजा गरे सबै देवताको पूजा गरे बराबर फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सनातन विश्वास छ । साउन महिना धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएकाले यो महिनालाई विशेष रूपमा लिइन्छ । सोमबार भनेको चन्द्रमाको बार हो । त्यो चन्द्रमालाई भगवान शिवजीले शिरमा धारण गर्ने भएकाले सोमबारका दिन व्रत बस्यो भने शिवजी पनि प्रसन्न हुने र चन्द्रमा पनि प्रसन्न हुने हुँदा जीवन सुखमय, दाम्पत्य जीवन आनन्दमय हुन्छ, सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र गौतम बताउँछन् ।
विशेषगरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत एवं पूजा गर्ने चलन छ । पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहर रही कठोर व्रत बसेर भगवान् शिवलाई प्राप्त गरेको किंवदन्तीअनुसार महिलाहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिन्छन् । साउनको महिना व्रत बसी शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान्, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास रहेको अध्यक्ष गौतमले बताए । महिनाको अरू दिन नसके पनि सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रही आएको छ । यस दिन आफू र आफ्नो परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एव विभिन्न कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा छ । हस्ता नक्षत्रयुक्त सोमबारको व्रतको प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको प्रसंग पुराणमा पाइन्छ ।
साउन महिनामा महिलाहरू हरियो पहिरनमा सजिनुका साथै, हरियो चुरा र हातमा मेहन्दी लगाएर प्रत्यक सोमबारका दिन भगवान् शिवको पूजा गरी व्रत बस्ने गर्छन् । यो व्रत विवाहित महिला आफ्नो घरपरिवार र श्रीमान्को स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्छन् भने अविवाहित महिला राम्रो श्रीमान् तथा शिवजीजस्तो वरपाउँ भनि र आफ्नो परिवारको सुख–शान्तिको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्छन् । साउन महिनाभर चोखो खाएर माछामासु नखाई शुद्ध भएर बस्ने चलन पनि छ । कतिपयले भने लसुन प्याज तथा बिटुलो मानिने कुनै पनि खानेकुरा नखाएर शुद्ध चोखो खाएर साउन महिना बार्ने गर्छन् ।
साउने सोमबारको व्रत विधि
सोमबारको व्रत विधि पनि अन्य व्रतजस्तै हुन्छ । यो व्रत सूर्योदयदेखि प्रारम्भ भएर तेस्रो प्रहरसम्म बसिन्छ । दिनको तेस्रो प्रहर अर्थात् करिब ३ बजेतिर शिवजीको पूजा गरी कथा सुन्नुपर्छ । व्रत गरेको दिन बेलुका एकपटक सात्विक भोजन गर्नुपर्छ । यसरी व्रत बस्दा सारा समस्या समाधान हुने जनविश्वास छ । व्रत बस्ने विभिन्न विधि र प्रकारहरू छन् । कोही साउनको सोमबार मात्र व्रत बस्छन् भने कोही पूरा महिना व्रत बस्छन् । उपवास भनेको खासमा केही पनि नखाएर बस्ने हो तर, शास्त्रकारहरूले पहिला आफ्नो शरीरको ख्याल गरेर मात्रै व्रत वा उपवास बस्नू भनेको हुँदा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्रै व्रत बस्न अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतम सुझाउँछन् ।
गौतमका अनुसार व्रत तीन किसिमका हुन्छन् । जलाहर, फलाहर र निराहर । दिनभरि पानी मात्रै पिएर व्रत बसिन्छ भने त्यसलाई जलाहर भनिन्छ । त्यस्तै फलफूलहरू खाएर व्रत बसिन्छ भने त्यसलाई फलाहर भनिन्छ । भने केही पनि नखाएर व्रत बसिन्छ भने निराहर भनिन्छ ।
यसपटक साउनको पहिलो सोमबार साउन ४ गते परेको छ । यस हिसाबले यस वर्ष साउनमा पाँचवटा सोमबार परेको छ । साउनको सोमबारको व्रत बस्दा बिहान स्नान आदि नित्यकर्म सकेर व्रतको संकल्प गर्नुपर्छ । त्यसपछि घरमै अथवा शिव मन्दिरमा गएर गंगाजल, बेलपत्र, सुपारी, फूल, धतुरो, भाङ आदिले भगवान् शिवको पूजा गरिन्छ ।
के–के खाने कुरा खायो भने व्रत भंग हुँदैन ?
नेपाल पञ्चांग निर्णायक समिति अध्यक्ष प्राडा.रामचन्द्र गौतमका अनुसार आठवटा कुरा खायो भने व्रत भंग हुँदैन । अर्थात निराहार बसेको जस्तै फल पाइन्छ । हामीले व्रत बसेका बेला पानी खादा व्रत भंग हुँदैन । त्यस्तै, जमिनमुनि फल्ने फलहरू (सखरखण्ड, पिँडालु, आलु आदि), फलफूल खादा पनि व्रत भंग हुँदैन । त्यस्तै, दूध, जौं, तील इत्यादिबाट बनेको पीठो, विद्वान् गुरुहरूले खान दिएको खाने कुराहरू खादा पनि व्रत भंग नहुने अध्यक्ष गौतम बताउँछन् । व्रत वस्दा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर यी आठवटा कुरा खाएर पनि बस्दा हुने उनले बताए । तर, व्रतप्रति भावना, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।